Ceni: faranana anio ny lisi-pifidianana | NewsMada
Ceni: faranana anio ny lisi-pifidianana
“Ny antontanisa farany raikitra mialoha izao fifidianana solombavambahoaka izao: nofaranana 25 388 ny isan’ny birao fandatsaham-bato manerana ny fari-pifidianana 119 eto Madagasikara. Nofaranana 10 302 194 ny isan’ny mpifidy. Mifarana anio ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy ” , hoy ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry. Izay no nahatonga ny bileta tokana nohafarana tatsy Afrika Atsimo ho 10 874 075. Tsy maintsy misy fiandry amin’ny antontan-taratasim-pifidianana, raha sanatria misy ny tranga tsy azo anoarana.
Noho ny lafiny teknika, vola, fitaovana, novaina ho taratasy tsotra (A 4) ny lisi-pifidianana amin’ity fifidianana ity, araka ny fanazavany. Mizara roa ny lisi-pifidianana. Tsy misy toerana fanaovana sonia ny iray, jerena sy anamarinana ny anaran’ny mpifidy alohan’ny handatsahany vato. Ny iray hafa, misy ny toerana ho an’ny sonia, anaovan’ny sekreteran’ny birao fandatsaham-bato sy ny mpifidy sonia avy nandatsa-bato.
Izay ao anaty lisitra ihany no mahazo mifidy
Izay olona ao anatin’ny lisi-pifidianana ihany no mahazo mifidy, ka mitondra kara-panondrom-pirenena, na karatra fahazoan-dalana mitondra fiara, na pasipaoro. Tsy misy ny fifidianana amin’ny alalan’ny fanomezan-dalana, na amin’ny “ordonnance” avy any amin’ny fitsarana.
Noho izany, manantitrantitra ny eo anivon’ny Ceni fa tsy ara-dalàna ny zava-misy any amin’ny toerana sasany, ahitana olona tokana na vitsivitsy mitondra ny kara-panondron’ny mponina ao amin’ny fokontany misy azy. Izy no misolo tena ny mpifidy rehetra ao anatin’ny fokontany: mitondra ny kara-panondron’izy rehetra, ka mandatsa-bato amin’izany.